पाटनको जात्रामा 'जात्रै' भयो, काठमाडौंको जात्रा कसरी शान्तिपूर्वक रोकियो? :: Setopati
पाटनको जात्रामा 'जात्रै' भयो, काठमाडौंको जात्रा कसरी शान्तिपूर्वक रोकियो?
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ १८
यस वर्ष इन्द्रजात्रा नमनाउने निर्णयपछि किलागलस्थित घरैभित्र पुलुकिसीको नित्यपूजा गरिँदै। तस्बिर सौजन्य: शोभा महर्जन
पाटनको सबभन्दा ठूलो सांस्कृतिक उत्सव रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा यसपालि ‘जात्रै’ भयो।
एक त कोरोना महामारीबीच रथयात्रा हुने कि नहुने टुंगो नलाग्दै रथ बनाउने अनुमति दिइयो। दोस्रो, अन्यौलबीच नै बुंगद्यः (रातो मच्छिन्द्रनाथ) लाई रथमा विराजमान गराइयो र महिनौंदेखि सडकमा अलपत्र छाडियो।
त्यतिले नपुगेर, रातो मच्छिन्द्रनाथका मूल पुजारीले ‘कर्फ्यू लगाएर भए पनि जात्रा सम्पन्न गरौं’ भनी लिखित आग्रह गर्दागर्दै स्थानीय निकाय र प्रशासनबाट सुनुवाइ भएन।
यी सबैको नतिजा हो बिहीबारको घटना, जब निशेधाज्ञा तोड्दै सयौं संख्यामा भेला भएका स्थानीय र गुठियारहरूले रथ तानेर बीच सडकमा ल्याए। प्रहरीले रोक्न खोज्दा पनि भीडले टेरेन।
स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीको फोहोरा चलाए, अश्रुग्यास हाने।। जवाफमा आक्रोशित भीडले प्रहरीमाथि ढुंगा बर्सायो, मोटरसाइकल तोडफोड गर्‍यो। एक जना ट्राफिक प्रहरीलाई त लखेट्दै लखेट्दै निर्घात कुटपिट गर्‍यो। घाइते प्रहरीले ‘हेल्मेट फुस्केको भए आफ्नो ज्यान जान सक्ने’ सेतोपाटीलाई बताएका छन्।
संस्कृति, सभ्यता र परम्परासँग जोडिएको रातो मच्छिन्द्रनाथका नाममा पाटनको पुल्चोक क्षेत्र क्षणभरमै तनावपूर्ण बन्यो।
उल्लासमय हुनुपर्ने जात्रास्थल रणमैदानमा परिणत भयो।
पाटनमा नहुनु भयो। जे भयो, त्यो स्थानीय सरकार, प्रशासन र जात्रा आयोजकबीच समयमै तालमेल नहुनुको दुष्परिणाम हो।
यस्तै हुन सक्थ्यो काठमाडौंको वसन्तपुर क्षेत्रमा पनि, यदि समयमै सबै पक्षसँग छलफल गरेर जात्रा रोक्ने निर्णय नगरिएको भए।
हामी सबैलाई थाहा छ, पाटनले जस्तै काठमाडौंले पनि यसपालि आफ्नो सबभन्दा ठूलो सांस्कृतिक उत्सव येँया पुन्ही, अर्थात् इन्द्रजात्रा ‘मिस’ गरेको छ। कोरोना महामारी नहुँदो हो र लकडाउनले हामी घरमै लक नहुँदा हौं त यति बेला इन्द्रजात्रामा रमिरहेका हुन्थ्यौं।
यति ठूलो जात्रा नहुँदा पनि काठमाडौंमा विरोधको स्वर चुइँक्क सुनिएन। न कसैले आक्रोश पोखे।
बरू हरेक वर्ष मनाउँदै आएको जात्रा मिस गर्दै सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा पुराना तस्बिर र भिडियोहरू सेयर गरे। इन्द्रजात्राप्रति सबैको सहानुभूति अभूतपूर्व रूपमा व्यक्त भयो।
जात्रापर्व भनेको मान्छेको संवेदनासँग जोडिएको कुरा हो। अलिकति पनि तलमाथि भयो भने मान्छेको हृदयमा चोट पुग्छ। त्यो चोटलाई समयमै मह्लमपट्टी गरिएन र सहमतिपूर्वक विकल्पको बाटो खोजिएन भने आक्रोशको रूप लिन सक्छ।
बिहीबार पाटनको सडकमा त्यही आक्रोश पोखिएको हो।
काठमाडौंले भने यसलाई सफलतापूर्वक 'ह्यान्डल' गर्दा पाटनको जस्तो नियति बेहोर्नुपरेन।
आखिर काठमाडौंले यति ठूलो घटनालाई कसरी शान्तिपूर्वक ह्यान्डल गर्‍यो? को थियो यसको पछाडि, जसले यति ठूलो जात्रा नमनाऊँ भनेर सबैलाई सहमतिमा ल्याए?
यसको श्रेय जान्छ, इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतम शाक्यलाई।
उनी कुमारीघरका संरक्षकसमेत हुन्। ‘जीवित देवी’ कुमारीको दैनिक स्याहारसुसार र लालनपालन गौतमकै परिवारको जिम्मेदारी हो।
उनले इन्द्रजात्रा मनाउने कि नमनाउने भनेर सम्बन्धित गुठियारहरूसँग तीन महिना अघिदेखि छलफल सुरू गरेका थिए।
गुठी संस्थान र खलःपुचले निर्णय नगर्दासम्म रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ नतानिने
पुल्चोक सडक प्रहरी नियन्त्रणमा, ललितपुर मेयरको सन्देश- ज्यापु समाजले रथयात्राबारे निर्णय गर्नेछ
रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानेर बीच सडकमा ल्याइयो, निषेधाज्ञा तोडेर आए सयौं (तस्बिरहरू)
मलमास सुरू हुन लागेपछि निषेधाज्ञा तोडेर मच्छिन्द्रनाथ रथ तान्ने प्रयास
पाटनमा बिहीबार भएको झडपका झलकहरू। (सबै तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी)